Geomagnetism: kedu ihe ọ bụ, gịnị ka ọ na-amụ na gịnị bụ njirimara ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyị nwere magnetik nke na-arụ ọrụ dị iche iche megide ụzarị anyanwụ. A na-akpọ sayensị nke na-enyocha mmalite, magburu onwe ya na ọdịiche nke ndọta ụwa a geomagnetism. Na nke a, anyị ga-ekwu maka geomagnetism na njirimara ya niile.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere geomagnetism, nọgide na-agụ.
1 Gịnị bụ geomagnetism
3 Geomagnetism na National Geographic .lọ Ọrụ
4 Ihe na-akpata geomagnetism
Gịnị bụ geomagnetism
Planetwa anyi nwere oghere magnetik nke puru ichoputa site n’otu ebe ma buru uzo ozo: otu n’ime ya na nke ozo. Geomagnetism bu sayensi diri oru inyocha mmalite, ngwongwo na ezumike nke ala magnet. Ogwe magnetik bụ ndị a hụrụ na isi ebe axis nke dipole na-agabiga elu ụwa. Ihe magnetik equator bụ ụgbọ elu n'akụkụ a axis. Ọ bụ mpaghara dị n'ime ya, ọbụnadị na edo edoghị m. Ka oge na-aga, anyị na-ahụ ụfọdụ mgbanwe ngwa ngwa oge, nke kachasị mkpa bụ na ọ na-agbanwe na oge 24. A maara ọdịiche ndị a dị ka mgbanwe ụwa.
Ihe ndọta nke dị na mpụga bụ nke kachasị n'ihi ọrụ anyanwụ na ionosphere na magnetosphere. E nwere oscillations ndị ọzọ kwa oge dịka mgbanwe ọnwa, mgbanwe kwa afọ na mgbanwe dị iche iche. E nwekwara ụfọdụ mgbanwe dị iche iche na-esite na mpụga mpụga dịka ndọta magnetik, bays, oké ifufe magnetik na mmetụta chromospheric.
Mgbe anyị na-ekwu maka ụwa geomagnetic anyị na-ahụ na njirimara bụ isi bụ na ọ bụ dipolar. Nke a pụtara na o nwere okporo osisi abụọ. N’otu aka anyị nwere osisi dị n’ebe ugwu, n’aka nke ọzọkwa, e nwere mkpanaka ndịda. Osisi abụọ ahụ hà nhata. Ọ dị ka a ga-asị na ọ bụ nsọtụ ihe ndọta. Ekele a ndọta compasses ọrụ. Ihe ndọta a adịghị arụ ọrụ nke ọma n’elu ụwa, ya mere, a na-eme kompas site n’itinye ndọta dị nfe ya.
Na magnetik, a na-emepụta ahịrị pụrụ iche nke a na-etinyekarị na okporo osisi ndị ahụ. Na magnetik ugwu osisi bụ n'ebe ndịda osisi nke geomagnetic ubi, mgbe geomagnetic south pole bụ ugwu nke a na-akpọkarị.
Iji nye anyị echiche, ọ dị ka a ga-asị na ụwa anyị nwere nnukwu ndọta n'ime ya, njedebe ya na-atụkwa mkpanaka ndị ahụ. Uzo nke magnet a na akwado ya adighi adi nma. Na-amalite site na etiti akụkụ, ị ga-ahụ ka mmanya ahụ dị ntakịrị. Nke a bụ ihe a maara dị ka mkpebi geomagnetic. Ihe dị iche n'etiti mpaghara ugwu na geomagnetic north na-egosi compass. Ọ bụ ụdị nkuku nke dịgasị dabere na ọnọdụ anyị nọ na ihu igwe.
Dịka anyị kwurula na mbụ, magnetik nke ụwa na-agbanwe ọtụtụ afọ. Ka ọ dị ugbu a, geomagnetism na-amụ na ikuku ndọta nke ụwa nwere mmasị na nkuku nke ogo 10 n'ihe gbasara ntụgharị nke ụwa. Anyi na-echeta na usoro ntụgharị ụwa a nwere ntụgharị 23 ogo.
Igwe magnet a na-agbasa site na ime mbara ala ruo na mbara igwe. N'èzí na mbara igwe bụ ebe ọ na-ezute, akpọrọ m ikuku anyanwụ. Ifufe anyanwụ bụ ihe a na-akpọ eruba nke ụmụ irighiri ihe ndị ewepụtara na anyanwụ na nke na-ebubo electron, proton na mkpụrụ alpha.
Geomagnetism na National Geographic .lọ Ọrụ
Ọrụ nke na-amụ geomagnetism nwere isi ọrụ nke ịmụ na ịlele magnetik nke ụwa n'ime mpaghara mba ọ bụla. Iji mee nke a, nwee nchepụta geomagnetic nke ejiri na-aga n'ihu na-edekọ mgbanwe niile na-arụ ọrụ na ndọta. A na-enweta data ahụ n'ọtụtụ ebe dị iche iche ma hazie ya iji mepụta akwụkwọ ọgụgụ geomagnetic.
A na-eme ọtụtụ ihe n'ọdụ ụgbọ na-eme ugboro ugboro ma na-eme ka ọnụọgụ karịa ugboro ugboro na ebe a na-akpọ isi ihe. Enwere ike ịnweta ụkpụrụ dị iche iche dị n'etiti isi ihe ụfọdụ na nke ọzọ na mbara ala. Ka anyị ghara ichefu na ala ndọta nke ụwa anaghị arụ ọrụ nha niile. Nke a pụtara na a ga-akọwasị ụdị ihe eserese na ọkwa ụwa iji gosipụta mgbanwe ndị na-eme ngbanwe nke ihe dị na magnetik ụwa.
Ọ nwere ụfọdụ ebe na mbara ụwa ebe anaghị eme map. Dịka ọmụmaatụ, nke a mere na Canary Islands. Nke a bụ n'ihi na agwaetiti ndị a nwere mmetụta siri ike nke ọdịdị mgbawa ha na-eme ka ịdepụta atụ na akpịrịkpa ndị a agaghị ekwe omume. A na-eji data ndị enwetara na ihe ndị a na-eme ka ndị na-eme nnyocha na mmekorita ya na ụfọdụ nzukọ mba ụwa.
Ihe na-akpata geomagnetism
A na-ahụ mmalite nke geomagnetism n'okpuru ụwa. Dị ka anyị kwurula, ụwa anyị nwere ọtụtụ akwa dị n'ime. Ndị ọkà mmụta sayensị na-eche na isi ime ahụ bụ nke ígwè siri ike ma gbaa ya gburugburu nke ụdị igwe mmiri na-ekpo ọkụ nke ukwuu. N'ihi na nrughari nke ígwè na-emepụta okwukwo ọkụ, a na-emepụta magnetik.
Ebe ọ bụ na mbara ụwa anyị a na-emekwa ngagharị, ọ na-enye aka n’ọkụ a n’enwe ike isi n’isi ya pụta n’akụkụ ndị ọzọ nke ime ahụ. Ihe ndọta nke mbara ụwa nwere oghere magnetik na-echekwa ya n'ọtụtụ ebe. Otu mbido bụ esịtidem na ndị ọzọ na mpụga. Ihe sitere n'ime bụ ihe karịrị 90% nke ndọta magnet. Isi n'ime ọ naghị akwụ chịm mana ọ na-adị iche na oge. Esemokwu ndị dị na ndọta magnet na-eme na ogologo oge ma chọọ mmelite nke ụdị ndị na-amụ ha.
Dịka ị pụrụ ịhụ, geomagnetism bụ sayensị na-anwa ịmụ banyere mgbanwe, njirimara na mgbanwe nke na-eme na ụwa anyị gbasara mbara ala magnet.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere geomagnetism.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Geomagnetism
Daalụ maka ozi dị oke mkpa m masịrị ya nke ukwuu ebe m na-amụ ihe ịtụnanya ndị a n'oge a ma ha nyere aka nke ukwuu.
Zaghachi Luisa Benavides